लाप्राक : भुकम्पपछि पर्यटकले रुचाएकाे नयाँ गन्तव्य, कसरी पुग्ने ? | Margadarsannew.com
लाप्राक : भुकम्पपछि पर्यटकले रुचाएकाे नयाँ गन्तव्य, कसरी पुग्ने ?
अश्विन दानी २५ कार्तिक २०७८, बिहीबार
गोरखा । १२ वैशाख २०७२ काे भुकम्पपछि चर्चामा आएको उत्तरी गोरखाको लाप्राक गाउँले पर्यटन व्यवसायमा फड्को मार्न थालेको छ । भुकम्पपछि एकीकृत नमूना बस्ती बनेसँगै धार्चे गाउँपालिका वडा नम्वर ४ गुप्सीपाखाकाे हाेमस्टे अहिले पर्यटकहरूको राेजाइमा पर्न थालेकाे छ ।